Njirimara, geology na njem nlegharị anya nke ugwu Toledo | Netwọk Mgbasa Ozi
Ọ bụrụ na ị na-eche ị ga-aga ịmụtakwu banyere geology nke Spain, the Montes de Toledo ha bụ nhọrọ dị oke mma maka ya. Ọ bụ otu n'ime ugwu kachasị ama ama na mpaghara Iberian Peninsula. Ugwu Toledo nwere mmalite site na mgbanwe nke oge ochie nke Iberian Hercinian massif. N'ime oge ndọtị ya, anyị ga-ahụ ọtụtụ ugwu ugwu na-akwụsị na Tagus na Guadiana basins na nke nwere ike iru ogologo nke 200 km ogologo na 100 km n'obosara.
N'isiokwu a anyị ga-agwa gị ihe gbasara ọdịdị ala nke ugwu Toledo na ihe ị ga - ahụ ma ọ bụrụ na ị kpebie iji izu ụka dị mma na ebe a.
1 Montes de Toledo dị ka ebe nlegharị anya njem nleta
2 Nature n'ụdị ya dị ọcha
3 Ogige ntụrụndụ Cabañeros
4 Lọ Montalbán
5 Mkpụrụ osisi Consuegra
Montes de Toledo dị ka ebe nlegharị anya njem nleta
Ugwu Toledo bu ugwu ndi no na mpaghara Toledo na Ciudad Real. Ndị a bụ ugwu ugwu nke mejupụtara ugwu ndị a: Sierra Altamira, Sierra Guadalupe (o nwere ọnụ ọgụgụ kachasị elu na ugwu ugwu ahụ dum, Villuerca, nke nwere mita 1.603 n'ịdị elu), Sierra Montañez, Sierra San Pedro na Sierra San Mamede.
Dịka ị pụrụ ịhụ, enwere ọtụtụ ihe ị ga-ahụ n'akụkụ a, ya mere ọ bara uru ịga hụ ya. Njem njem ime obodo dị n'ebe a na-arụsi ọrụ ike ma na-akwalite ọdịbendị ọdịnala na gastronomic. Ọ bụrụ na ị gaa n'ugwu Toledo, n'ezie ị ga-achọ ịmeghachi. Anyị ga-ahụ ihe ị ga - ahụ ma ọ bụrụ na ị ga - eme ngwụsị izu ka ị wee nwee ike iwepụta oge ma nwee ike iji ya.
N'ime otu ugwu a, anyị na-ahụ ụlọ obibi na ụlọ nri zuru oke edoziri nke ọma iji nọrọ n'oge dị mma na-eri nri nke gastronomy nke ebe ahụ. Ogo nke nri ugwu ga-ahapụ gị ịchọrọ ịnwalekwu nri. A na-ahụta mpaghara a dị ka otu n'ime ebe mmịpụta kachasị maka igwu ala, mmanya, mmanụ na mmanụ a honeyụ. Na mgbakwunye, ọ bụ ama maka ụrọ, ígwè, osisi, akpụkpọ anụ na ọbụna ọrụ teknụzụ.
Omume ọma ndị a ga-apụta na ị gaghị apụ na-enweghị ịnwale nri ụtọ dị ụtọ ma ọ bụ na-ewere ụfọdụ ihe ncheta ejiri mara mma mee njem gị. Ọ bụ ezie na amara a niile na-eme ka ndị njem nleta na-adọrọ mmasị, ihe dị mkpa bụ oghere sitere n'okike maka ọnọdụ nchekwa ya. Nke a bụ eziokwu bụ eziokwu nke na-adọta ndị njem si n'akụkụ peninsula niile. Enwere umu anumanu di iche-iche na oke ohia na uzo nke di na Toledo.
Nature n'ụdị ya dị ọcha
N’etiti ugwu ka anyị pụrụ ịhụ ụdị anụmanụ dị ka ụgbala na udele ojii. Enwere ike ịchọta ụdị a naanị na mpaghara Spain a, maka ihe otu onye nwere ike ikwu na ha bụ ọrịa. Na mgbakwunye, ọ bụ nnukwu oghere ebe achọrọ ihe niile gbasara gburugburu ka ọ bụrụ ebe obibi zuru oke maka ụfọdụ ụdị dị na mkpochapụ dịka Iberian lynx na ugo nke alaeze.
A na-eme ụdị ụdị fauna dị iche iche site na ụdị ndị ọzọ dị ka mmiri mmiri, mmiri ozuzo, salamanders, ma ọ bụ mmiri ozuzo. Ahịhịa nke akụkụ nile nke ugwu pụtakwara ìhè. Anyi nwere ike ichota oke ohia Mediterenian nke mejuputara holm oaks, osisi ohia, akpu ohia, thyme, rosemary na willows.
Oghere ndị sitere n'okike nke anyị na-ahụ n'ugwu Toledo bụ ihe a chọrọ. Ọ bụrụ na ị kwụsịghị na gburugburu ebe obibi, ị ga-atụ uche ihe kachasị mma ebe a niile, ebe ọ bụ na ọdịdị ga-enye gị ala kachasị mma na ahụmịhe na enweghị mgbagha. Gastronomy na ọdịbendị, ọ bụ ezie na ọ dị oke iche, anyị nwere ike ịchọta ya n'ọtụtụ ebe nwere njirimara yiri ya. Anyị ga-akọwa ebe ndị kacha baa uru ịga.
Ogige ntụrụndụ Cabañeros
A na-ahụta ya oke ọhịa Mediterranean kachasị mma na Europe niile. Ọ bụghị naanị ogige ntụrụndụ nkịtị, ọ bụ ihe pụrụ iche. Ọ bụ naanị ebe dị na Europe niile na-enweghị oke nsogbu n'oké Osimiri Mediterenian. N'ihi ezi ọnọdụ nchekwa anyị bụ anyị nwere ike ịchọta ụmụ anụmanụ n'ihe egwu nke mkpochapụ na ọbụlagodi mkpọmkpọ ebe nke Oge A.
Ọ dị na Northwest nke Ciudad Real na Ebe Ndịda Ọwụwa Anyanwụ nke Toledo. E kwupụtara dị ka Ogige Mba na 1995. Ọ bụ mpaghara nke Nchedo Pụrụ Iche maka Nnụnụ ma a na-ahụta ya dị ka saịtị nke Mkpa Ọha. Dịka ị pụrụ ịhụ, ọnụ ahịa nke ugwu Toledo dị oke elu, yabụ enweghị ike inye ya site na gburugburu ebe obibi ọzọ.
Ihe omumu ya nwere oke obibi obibi na n'ime ahihia niile anyi puru ichota ahihia Atlantic. Achikota ahihia a na mpaghara Ribera, Herbazales, Peatlands, Willows, akpu akpu, thyme na ndi ozo.
Castlọ a dị na ndịda nke mpaghara Toledo. Nnukwu ụlọ ahụ nwere mmalite ndị Alakụba ma bụrụkwa nke kachasị ebube na mpaghara ahụ dum. Mkpa ọ dị na nnukwu ọnọdụ nchekwa ya na n'ihi na Order nke Templars biri n'ebe ahụ.
N'ime nnukwu ụlọ a, e nwere ọtụtụ akụkọ akụkọ ama ama dịka nke "Tebụl nke Solomon." Akụkọ ndị a na-egosi na Eze Solomọn dere ihe niile ọ maara banyere mbara igwe na usoro okike.
Mkpụrụ osisi Consuegra
Ebumnuche ọzọ ị ga-eleta mgbe ị na-aga ugwu Toledo bụ igwe a na-anọ na Cerro Calderico. E wuru ha n’agbata narị afọ nke iri na isii na nke iri na itoolu ma n’oge ha enwere mkpokọta igwe ọka 13.
Mgbe ụfọdụ nwughari na mweghachi, taa enwere naanị igwe 12. Mills igwe nwere ụfọdụ masonry mgbidi na a conical ụlọ na-agba gburugburu. Ugbu a, a na-eleta ha nke ọma maka ọnọdụ nchekwa ha dị mma. Dịka ị hụworo, akụnụba ndị njem nleta nke ugwu Toledo dị n'eziokwu bụ na ihe ọ bụla ọ gosipụtara nwere ọnọdụ nchekwa dị elu. Nke a dị mma ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịbawanye ogo ndị njem. Onweghi onye choro iga lee ihe mebiri emebi na nke n’enyeghi ihe obula.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịnụ ụtọ ugwu Toledo ma mee atụmatụ njem a na-agaghị echefu echefu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Montes de Toledo